War deg deg ah: Somaliland oo ka baxday Dhahar iyo Xinglool oo laga sii rasaaseyey, waa maxay sababtu? | maakhir.com
War deg deg ah: Somaliland oo ka baxday Dhahar iyo Xinglool oo laga sii rasaaseyey, waa maxay sababtu?
Dhahar:- Wararkii ugu danbeeyey ee dagaalada Sanaag ayaa waxa weeye in ciidamda Somaliland ay ka bexeen goobihii ay fadhiyeen sidoo kalena, waxaa intaa dheer firxadkii ciidamada Somaliland laga rasaaseyey Xinglool oo ay si xawli ah ku dhaafeen, isku soo duu duub, Somaliland ma sheegin sababaha ay uga baxday Dhahar, waxayse u egtahay in laga itaal roonaadey.
Goor dhoweyd ayaanu teleefanka ka dhigney Dhahar oo khadkii isgaarsiinta dib ugu soo noqday waxana naloo xaqiijiyey in ciidamada Puntland qeyb ka mid ahi ay gudaha ku sugan yihiin. Magaaladanu ay gacanta ugu jirto ciidamo beeleedyo iyo kuwa Daraawishta.
Waxaa intaa dheer inaanu la xiriirney magaalada Xingalool waxaana naloo xaqiijiyey in markii ay ciidamada Somaliland ag marayeen Xingalool in rasaas iyo madaafiic lagu tuurey taas oo kaliftey in ciidamadaasi si xawli ah uga sii cararaan aagaas.
Bixitaanka Somaliland ayaa waxaa ka danbeeyey kadib markii shaley galab weerar sadex geesood ah ay kusoo qaadeen ciidamada Daraawiishta iyo ciidamo beeleedyo iyo kuwa Somaliland oo markaa iyaga laga awood roonaadey.
Wax war ah kama soo bixin dhinaca Dowlada Somaliland iyadoo dhabtu ay tahay in ciidamadooda laga soo saarey Sanaag Ceerigaabo mooyee.
Dhinaca Puntland ayaa horey u sheegtey in Maamulkoodu uu ka taliyo Dhahar waana sida ay sheegtey Puntland oo magaalada iyagaa ka taliya.
Khasaaraha dagaalka ee dadweynaha soo gaarey ayaa waxa weeye in hal wiil oo yar uu ku dhaawacmay iyo guryo aan sidaa u badneyn, waxayna dadweynuhu muujiyeen Caro lixaadleh oo ay ku farta ku fiiqeen in labada Maamul ay ka masuul yihiin dhibka soo gaarey iyaga.
« War Deg Deg ah:Ciidamada Soomaaliland oo isaga cararey Duleedka Dhahar, iyo ciidamada Puntland oo haatan Gacanta ku haya magaalada Dhahar….
War deg deg ah:- Masuuliyiin Puntland oo kusoo wajahan Dhahar, xagee bey ku sugan yihiin Somalilandse? »